Izindaba - Imibala emihle kakhulu yezipikili zezipikili ezimfushane
Imibala emihle kakhulu ye-nail polish yezipikili ezimfushane
Kunezinhlobo eziningi zamanicure emakethe esikhathini samanje. Ukuzicwala okuningi kwenzelwe izipikili ezinde, kepha lokho akusho ukuthi ayikho imibala emnandi nemiklamo yalabo abanezinzipho ezimfushane. Izipikili ezimfushane zingabonisa ukubukeka okuningi okumnandi nokuhlukile. Funda ngemibala emihle kakhulu ye-nail polish yezipikili ezimfishane ngokufunda ngezansi.
IZIPHUKU EZIMBILI NEZIVULET
Kungaba mnandi ukuzama imibala esho okuthile ngawe. Uphephuli uvame ukuba umbala owuthandayo othandwayo kubantu abaningi. Muhle futhi ugqame kweminye imibala eminingi ejwayelekile yezipikili. Zama umthunzi we-lilac okhanya kancane futhi olungele noma yisiphi isizini.
IMANICURE EMHLOPHE NEPINIKI
Uma izinzipho zakho zimfushane, lokho akusho ukuthi awukwazi ukubanika ukubukeka okuhle. Qala izinzipho zakho ngophinki okhanyayo, ongazigqoka ngezinhlobonhlobo zokubukeka okungajwayelekile. Ngemuva kwalokho, penda okuncane okumhlophe emaphethelweni aphezulu ukudala umuthi waseFrance. Uma ufuna ukwenza ubuciko, engeza kokumhlophe ukuze udale ezinye izinkanyezi ezithandekayo. Lokhu kuyinikeza ukuthinta kokuzijabulisa ngaphandle kokuya ngaphezulu-phezulu.
IZIPikili EZIBUSHEKILE EZIBHEDLELE
Izipikili ezimfushane kulo mbala obomvu ziyizinto zakudala. Zizokhanya ngokumangalisayo ngosuku olubalele bese zengeza ukuthinta kobuhle kumcimbi wasebusuku. Noma, penda izinzipho zakho ngokubomvu okushisayo ngosuku ohlela ukuyokwenza okuthile okujabulisayo ngaphandle. Ukubukeka kulula ngenkathi kusenobuhle.
Into enhle nge-nail polish enqunu ukuthi isebenza cishe nazo zonke izinhlobo zezinzipho. Izipikili ezinqunu zinikeza ukubukeka okuhle ngezikhathi ezahlukahlukene, kufaka phakathi imicimbi engajwayelekile neyomsebenzi. Kukhona ngisho nezinhlobonhlobo zemibala enqunu efaka umbala obomvana, ompunga, omhlophe qwa nezindlovu. Izipikili ezinqunu zizosebenza kahle ekuqedeni i-gloss noma i-matte.
Dala izinzipho zakho ezinemibala ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngokuvakashela inkampani yaseYaqin. Lapha, ungathola imibala ye-gel polish yobungcweti ehlala isikhathi eside futhi emelana nokubuna.